Containers - Logistics Guide
Friday, 22 May 2020 04:31
တိုငျဝမျ အခွစေိုကျ Wan Hai မရှုံးပမေဲ့၊ Evergreen နှငျ့ Yang Ming အရှုံးပွလို့ နှဈခု ပေါငျးရနျဆှေးနှေး
တိုငျဝမျ အခွစေိုကျ ကုနျသတ်ေတာ သင်ျဘောလုပျငနျးတှထေဲက Wan Hai တဈခုဘဲ ပထမ ၃ လပတျ အရှုံးမပွဘဲ၊ Evergreen နှငျ့ Yang Ming ကတော့ အရှုံးပွခဲ့ပါတယျ။ Yang Ming က US$ ၂၇ သနျး နှငျ့ Evergreen က US$ ၁၅ သနျး ရှုံးနခြေိနျမှာ Wan Hai က US$ ၃ သနျး အမွတျပွခဲ့ပါတယျ။
Thursday, 30 April 2020 04:20
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကှနျတိနျနာသင်ျဘော ဗှဆေျောဦးခရီး စတငျ
TEU (ပေ ၂၀ ကှနျတိနျနာနှငျ့ညီမြှသောယူနဈ) ၂၄၀၀၀ တငျဆောငျနိုငျသော
Tuesday, 28 April 2020 03:56
Thursday, 23 April 2020 07:35
ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံနှငျ့ ယာဉျရပျနားစခနျး ရတေမာလမျးအတှကျ စညျးကမျးခကျြမြား ထုတျပွနျ
ဘုရငျ့နောငျပှဲရုံနှငျ့ ယာဉျရပျနားစခနျး သာယာရေးနှငျ့ စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့မှ
Friday, 10 April 2020 15:02
ခရီးစဉျပကျြ ကှနျတိနျနာသင်ျဘော ပမာဏ teu ၃ သနျးကြျော စံခြိနျတငျ
Wednesday, 26 February 2020 09:11
Monday, 10 February 2020 09:28
Wednesday, 05 February 2020 04:08
Diamond Princess သဘောင်္တှငျ ရောဂါကူးစကျခံထားရသူ ၁၀ ဦးတှရှေိ့
Tuesday, 04 February 2020 07:35
Coronavirus သညျ ကှနျတိနျနာငှါးရမျးမှုကဏ်ဍအပျေါ မညျသို့အကြိုးသကျရောကျမှုရှိသလဲ?
ကမ်ဘာတဈဝနျးရှိ ထောငျပေါငျးမက မြားစှာသောလူမြားသညျ Wuhan မှာ ဖွဈပျေါနသေော coronavirus လူပွောမြားဆုံး ဖွဈခဲ့ပွီး Wuhan တှငျ ကူးစကျခံသူ အမြားအပွားလဲ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
အောကျတိုဘာလ ၇ ရကျ ၂၀၁၈ နံနကျကမွထေဲပငျလယျ Corsica ကြှနျးမှ ၁၇ မိုငျအကှာတှငျ ကြောကျခထြားသော ကုနျသတ်ေတာသင်ျဘော CSL Viginia ကို တူနီးရှား မောငျးတကျ-မောငျးဆငျး ခရီးသညျတငျသင်ျဘော Ulysse ကအရှိနျဖွငျ့ ဝငျတိုကျမိပွီး ကူးတို့သင်ျဘောဦးပိုငျးဟာ ကုနျသတ်ေတာသင်ျဘော၏ ကိုယျထညျအတှငျးဖေါကျဝငျပွီး စှပျလြှကျခြိတျမိ နပေါတယျ။ ကုနျသတ်ေတာသင်ျဘပေျေါမှ သင်ျဘောလောငျစာဆီ တနျ၅၂၀ ပငျလယျထဲဖိတျစငျသှားပါတယျ။ ကူးတို့သင်ျဘော Ulysse ဟာ အီတလီနိုငျငံ Genoa ဆိပျကမျးမှ တူနီးရှားနိုငျငံ Rodesသို့အသှားမှာ တိုကျမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ (၅)ရကျကွာမှသာ ကူးတို့သင်ျဘော Ulysse ကိုပွနျဖွုတျနိုငျခဲ့ပွီး တူနီးရှားနိုငျငံသို့ဆကျလကျထှကျခှာသှားပါတယျ။ ကုနျသတ်ေတာသင်ျဘော Virginia ကတော့ အခငျးဖွဈနရောမှာဆကျလကျ ကြောကျခြ နဆေဲဖွဈပွီး သင်ျဘောပိုငျရှငျက သင်ျဘောကငျြးကိုပို့ဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ပငျလယျထဲဖိတျစငျသှားသော သင်ျဘောလောငျစာဆီတှကေိုတော့ သင်ျဘော( ၁၂) စီးဖွငျ့ပွနျလညျစုပျယူပွီး သနျ့ရှငျးရေးလုပျနပေါတယျ။ သင်ျဘောတိုကျမိမှုကွောငျ့ သင်ျဘော ၂စီးလုံး၏ ပကျြစီးမှုဟာ ယူရို ၁၃.၅ သနျး( ဒျေါလာ ၁၅.၅ သနျး) နှငျ့ ဖိတျစငျသှားသောလောငျစာဆီမြား ရှငျးလငျးဖယျရှားသညျ့စားရိတျ ယူရို ၁၀ သနျးခနျ့ ကုနျကမြယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ (g Caprtain) တူနီးရှားI ပွငျသဈနှငျ့ Cypriot နိုငျငံမြားမှ စုံစမျးစဈဆေးသူမြားက ၃ လကွာစဈဆေးပွီး သူတို့ရဲ့ တှရှေိ့ခကျြတှကေို ၂၀၁၉ ဇနျနဝါရီလ (၇ ) ရကျနကေ့ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့၏စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြအရ သင်ျဘော ၂ စီးလုံးမှာ တာဝနျမကငျးဘဲ လူအမှားကွောငျ့ဖွဈရတာလို့ဆိုပါတယျ။ တူနီးရှားကူးတို့သင်ျဘော Ulysse ရဲ့ ပဲ့စငျပျေါမှာတာဝနျကသြူ Watch Officer တဈဦး(သင်ျဘောရယောဉျမှုး) သာရှိပွီး အခငျးဖွဈခြိနျမှာ သူရဲ့ဖုနျးနဲ့ Chatting လုပျနပွေီး ရဒေါအနားမှာမရှိဘူးလို့ စဈဆေးတှရှေိ့ရပါတယျ။ အလားတူကုနျသတ်ေတာသင်ျဘော Viginia ၏ ပဲ့စငျပျေါတှငျတာဝနျကြ သင်ျဘောအရာရှိတှဟော Radar alarms ကိုအလေးဂရုမပွု ခဲ့ကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရပါတယျ။ ကုနျသတ်ေတာသင်ျဘောဟာ သင်ျဘောတှခေုတျမောငျးသှားလာနတေဲ့ Shipping Lane အလယျမှာဘာကွောငျ့ ကြောကျခထြား တာလညျး လို့မေးခှနျးထုတျခဲ့ကွပါတယျ။ သင်ျဘောပိုငျရှငျရဲ့ဖိအားပေးမှုကွောငျ့ကြောကျခခြဲ့ရတာပါဆိုတဲ့ရှငျးလငျးခကျြဟာလညျး ဆီလြှျောမှု မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယျ။ မှတျတမျးမှတျရာတှအေရ အခုသင်ျဘောခငျြးတိုကျမိတဲ့နရောဟာ ကုနျသှယျရကွေောငျးသင်ျဘောတှေ ခုတျမောငျးနတေဲ့ ရလေမျးကွောငျးပျေါမှာဖွဈပွီး အခုလိုသင်ျဘောတဈစီး ကြောကျခထြာားတာ ပထမဆုံးလို့ ဆိုပါတယျ။ သကျတမျးရငျ့ P&I Clubတဈခုဖွဈတဲ့ West of England P&I Club က သူရဲ့ အဖှဲ့ဝငျ သင်ျဘောပိုငျရှငျတှကေို ၂၀၁၁ခုနှဈ ဧပွီလ ကတညျးက ထိခိုကျဆုံးရှုံးမှု ကာကှယျရေးနှငျ့ ဘေးအန်တရယျ ကငျးရှငျးမှုဆိုငျရာနှိုးဆျောစာကိုဖွနျ့ဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ ထို Club ရဲ့လလေ့ာမှုအရ ရကွေောငျး မတျောတဈဆဖွဈမှုတှေ ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးမြားအနကျ ပဲ့စငျတာဝနျကြ Watch Keeperရဲ့ mobile phone/ smart phone သုံးစှဲနမှေုဟာလညျး အကွောငျးရငျးတဈရပျ ဖွဈကွောငျးI ပဲ့စငျပျေါတှငျ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ဖုနျးပွောနမှေုI Internet သုံးစှဲနမှေုကွောငျ့ သင်ျဘောတိုကျမိတဲ့ cases တှအေမြားအပွား ရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ သင်ျဘောသောငျတငျသှားတဲ့ Incidents ဟာ အမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ ယနအေ့ခါတှငျ Mobile/ Smart phone တှရေဲ့ Function တှစေုံလငျလာသလို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့သုံးစှဲလာကွပွီး အခြိနျပွညျ့ဆကျသှယျမှု ပွု နိုငျလာကွပွီဖွဈလို့ သင်ျဘောသားတှအေနဖွေငျ့လညျး မိသားစုနှငျ့ခှဲခှာပွီး သင်ျဘောပျေါမှာ အထီးကနျြမှုကို တာဝနျခြိနျ ပွငျပမှာ Mobile/ Smart phone အသုံးပွု ၍မိသားစု နှငျ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးတို့နဲ့ဆကျသှယျနိုငျခွငျးဖွငျ့ ဖွလြေော့နိုငျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး mobile/ smart phone အသုံးပွု မှုကို ကနျ့သတျတာထကျ မျောတျောကားမောငျးစဉျ ယဉျမောငျးတှေ mobile/ smart phone အသုံးမပွုရနျ တားမွဈထားသကဲ့သို့ သင်ျဘောခုတျမောငျးစဉျ ပဲ့စငျ၌ တာဝနျကသြညျ့ အခြိနျတှငျ အသုံးပွု မှုကို တားမွဈပိတျပငျသငျ့တယျလို့ အကွံပွု ထားပါတယျ။ ဒါအပွငျအဖှဲ့ဝငျသင်ျဘောပိုငျရှငျတှကေို သင်ျဘောတှရေဲ့ ဘေးအန်တရယျကငျးရှငျးရေးစီမံခနျ့ခှဲမှုစနဈ (Safety Management System) ရဲ့ပဲ့စငျ Watch-keeping လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျပွီး သငျ့တျောသလို ပွငျဆငျမှမျးမံသှားရနျနှငျ့ သင်ျဘောမောငျးနှငျနစေဉျ mobile phone အသုံးပွု မှုကွောငျ့ ပဲ့စငျတာဝနျကြ Watch Keeper တှေ အာရုံထှပွေားမှုမဖွဈရနျI အထူးသဖွငျ့ ပဲ့စငျ Watch Keeper အနဖွေငျ့အပွညျ့အဝ အာရုံစိုကျဖို့လိုတဲ့ အောကျပါအခွအေနမြေိုးတှမှော mobile phone နှငျ့ လကျကိုငျသတငျးတိုပို့စကျတှေ မသုံးရနျ တား မွဈသညျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားကို Safety Management System တှငျထညျ့သှငျးရေးဆှဲရနျတိုကျတှနျးထားပါတယျ။ * ရကွေောငျးပွစခနျး (pilot station) ရောကျရှိသညျ့အခြိနျ* ဆိပျကမျးအတှငျးသို့/မှ ဝငျထှကျခြိနျ* ဆိပျကမျးဧရိယာအတှငျးနှငျ့ သင်ျဘောမြား ဆိပျခံတံတားမအားသဖွငျ့ ကြောကျခြ စောငျ့ဆိုငျးသညျ့ ကြောကျဆူးဆိပျ (anchorage) အနီးအနားတှငျ သင်ျဘောခုတျမောငျးစဉျအခြိနျ* မွငျကှငျးမသဲကှဲသညျ့အခြိနျ* သင်ျဘောမြားအသှားအလာမြားသညျ့နရောဝနျးကငျြ* restricted sea room အတှငျး သင်ျဘောခုတျမောငျးစဉျ* ပဲ့စငျတှငျ တာဝနျကြ watch keeping တဈဦးတညျးရှိနခြေိနျ တို့တှငျဖွဈပါတယျ။ >>>Zawgyi<<< သင်္ဘောပဲ့စင် (bridge) တွင် တာဝန်ကျစဉ် mobile/smart phone သုံးနေခြင်းကြောင့် သင်္ဘောချင်းတိုက်မိမှုဖြစ်ပွား အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် ၂၀၁၈ နံနက်ကမြေထဲပင်လယ် Corsica ကျွန်းမှ ၁၇ မိုင်အကွာတွင် ကျောက်ချထားသော ကုန်သေတ္တာသင်္ဘော CSL Viginia ကို တူနီးရှား မောင်းတက်-မောင်းဆင်း ခရီးသည်တင်သင်္ဘော Ulysse ကအရှိန်ဖြင့် ဝင်တိုက်မိပြီး ကူးတို့သင်္ဘောဦးပိုင်းဟာ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘော၏ ကိုယ်ထည်အတွင်းဖေါက်ဝင်ပြီး စွပ်လျှက်ချိတ်မိ နေပါတယ်။ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘေပေါ်မှ သင်္ဘောလောင်စာဆီ တန်၅၂၀ ပင်လယ်ထဲဖိတ်စင်သွားပါတယ်။ ကူးတို့သင်္ဘော Ulysse ဟာ အီတလီနိုင်ငံ Genoa ဆိပ်ကမ်းမှ တူနီးရှားနိုင်ငံ Rodesသို့အသွားမှာ တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၅)ရက်ကြာမှသာ ကူးတို့သင်္ဘော Ulysse ကိုပြန်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး တူနီးရှားနိုင်ငံသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘော Virginia ကတော့ အခင်းဖြစ်နေရာမှာဆက်လက် ကျောက်ချ နေဆဲဖြစ်ပြီး သင်္ဘောပိုင်ရှင်က သင်္ဘောကျင်းကိုပို့ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲဖိတ်စင်သွားသော သင်္ဘောလောင်စာဆီတွေကိုတော့ သင်္ဘော( ၁၂) စီးဖြင့်ပြန်လည်စုပ်ယူပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေပါတယ်။ သင်္ဘောတိုက်မိမှုကြောင့် သင်္ဘော ၂စီးလုံး၏ ပျက်စီးမှုဟာ ယူရို ၁၃.၅ သန်း( ဒေါ်လာ ၁၅.၅ သန်း) နှင့် ဖိတ်စင်သွားသောလောင်စာဆီများ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသည့်စားရိတ် ယူရို ၁၀ သန်းခန့် ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (g Caprtain) တူနီးရှားI ပြင်သစ်နှင့် Cypriot နိုင်ငံများမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ၃ လကြာစစ်ဆေးပြီး သူတို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေကို ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ (၇ ) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ သင်္ဘော ၂ စီးလုံးမှာ တာဝန်မကင်းဘဲ လူအမှားကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ တူနီးရှားကူးတို့သင်္ဘော Ulysse ရဲ့ ပဲ့စင်ပေါ်မှာတာဝန်ကျသူ Watch Officer တစ်ဦး(သင်္ဘောရေယာဉ်မှုး) သာရှိပြီး အခင်းဖြစ်ချိန်မှာ သူရဲ့ဖုန်းနဲ့ Chatting လုပ်နေပြီး ရေဒါအနားမှာမရှိဘူးလို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ အလားတူကုန်သေတ္တာသင်္ဘော Viginia ၏ ပဲ့စင်ပေါ်တွင်တာဝန်ကျ သင်္ဘောအရာရှိတွေဟာ Radar alarms ကိုအလေးဂရုမပြု ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောဟာ သင်္ဘောတွေခုတ်မောင်းသွားလာနေတဲ့ Shipping Lane အလယ်မှာဘာကြောင့် ကျောက်ချထား တာလည်း လို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သင်္ဘောပိုင်ရှင်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကျောက်ချခဲ့ရတာပါဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းချက်ဟာလည်း ဆီလျှော်မှု မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရ အခုသင်္ဘောချင်းတိုက်မိတဲ့နေရာဟာ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းသင်္ဘောတွေ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီး အခုလိုသင်္ဘောတစ်စီး ကျောက်ချထာားတာ ပထမဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ သက်တမ်းရင့် P&I Clubတစ်ခုဖြစ်တဲ့ West of England P&I Club က သူရဲ့ အဖွဲ့ဝင် သင်္ဘောပိုင်ရှင်တွေကို ၂၀၁၁ခုနှစ် ဧပြီလ ကတည်းက ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု ကာကွယ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာနှိုးဆော်စာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ထို Club ရဲ့လေ့လာမှုအရ ရေကြောင်း မတော်တစ်ဆဖြစ်မှုတွေ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများအနက် ပဲ့စင်တာဝန်ကျ Watch Keeperရဲ့ mobile phone/ smart phone သုံးစွဲနေမှုဟာလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်းI ပဲ့စင်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖုန်းပြောနေမှုI Internet သုံးစွဲနေမှုကြောင့် သင်္ဘောတိုက်မိတဲ့ cases တွေအများအပြား ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့် သင်္ဘောသောင်တင်သွားတဲ့ Incidents ဟာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ဇင် (MICS- UK) MyanmarLogisticsGuide
Monday, 13 January 2020 08:09
တရုတျအမြိုးသားသိပ်ပံပညာဆု ရရှိခဲ့သညျ့ ပွညျတှငျးဖွဈ သောငျတူးရယောဉျ
Tuesday, 07 January 2020 07:32
သင်ျဘောလိုငျးမြားကကောကျခံသညျ့ အပိုဆောငျကွေး (surcharges) အပျေါ ကုနျတငျပို့သူမြား နှငျ့ သင်ျဘောလိုငျးတို့၏ ဝိရောဓိ
တရုတျသယျယူပို့ဆောငျရေးဝနျကွီးဌာနက သင်ျဘောပိုငျရှငျမြား၊ NVOCC မြားအပါအဝငျ ကုနျသတ်ေတာ သယျယူပို့ဆောငျလုပျငနျးလုပျကိုငျသူ container operators ၁၂ ဦးအား သင်ျဘောခ ဈေးနူနျးသတျမှတျတောငျးခံရာတှငျ မူမမှနျမှူမြားတှေ့ ရှိရသျောကွောငျ့ ဒဏျငှတေပျရိုကျခဲကွောငျး သတကျးထုတျပွနျပါတယျ။ တပျရိုကျသျော စုစုပေါငျး ဒဏျကွေး ပမာဏမှာ ယှမျ ၁.၀၁ သနျး ( ဒျေါလာ ၁၄၄,၀၀၀) ဖွဈပွီး၊ Container Operators companies ၁၂ ခုမှာ Cosco Container Lines, CMA CGM, ZIM, Wan Hai Lines, TS Lines, TS Lines, HMM, RCL, PIL, US United Logistics, Air-City Ind, Expeditors International, and C.H. Robinson Freight Services တို့ဖွဈပါသညျ။ (တရုတျနိုငျငံဟာ သူ့နိုငျငံရဲ့ သင်ျဘောလိုငျး Cosco ကိုပါ အရေးယူတာပါ)
Wednesday, 11 December 2019 06:47
Maers လိုငျးက ဝနျထမျးတှလြေော့ဖို့စီစဉျနေ
Saturday, 02 November 2019 05:01
Saturday, 13 July 2019 04:24
ပုံ (၁) က ကုန်သေတ္တာကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းထား တယ်လို့ သတိပေးထားတဲ့ label လို့ထင်ပါတယ်။ သတိပေးချင်တာဆိုရင် ပုံ(၂) မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ label လို ဖြန်းထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးအမည် ဖြန်းထားတဲ့ နေ့စွဲနဲ့ အချိန်ကိုလည်း ဖေါ်ပြရပါတယ်။
Saturday, 15 June 2019 07:05
လကျဝယျရှိ ကုနျသတ်ေတာ စီမံခနျ့ခှဲမှု
သင်ျဘောလိုငျးပွေးဆှဲသူ (liner Operator) ၏အဓိကလိုအပျခကျြမှာ ကုနျတငျပို့လိုသူ ဖောကျသညျမြားလိုအပျသညျ့ ကုနျသတ်ေတာ အမြိုးအစားကို၊ လိုအပျသညျ့အခြိနျတှငျ၊ လိုအပျသလောကျ အသငျ့ရရှိရေးဖွဈပါသညျ။ ကုနျသတ်ေတာအခှံ လိုအပျနသေောဆိပျကမျးတှငျ ကုနျသတ်ေတာ လုံလောကျမှုမရှိဖွဈနပွေီး၊ မလိုအပျသောနရောတှငျ ကုနျသတ်ေတာ အခှံမြားစုပုံနခွေငျးသညျအကြိုးမရှိဘဲ ဆုံးရုံးမှုကို ဖွဈစပေါတယျ။
ကုန်ဝယ်သူ/ ကုန်လက်ခံမည့်သူက လာမရွေး/ လာမထုတ်ယူတော့သောကုန်စည်
Saturday, 01 June 2019 10:42
ကုန်​​သေတ္တာ သ​င်္ဘော လုပ်​ငန်း ​ဈေးကွက်​သတင်းအချက်​အလက်​​ထောက်​ပံ့​ရေး ကုမ္ပဏီ Sealntel က၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း သ​င်္ဘော လုပ်​ငန်းအတွင်းသို့ အရွယ်​လွန်​ ကုန်​​သေတ္တာ သ​င်္ဘော ကြီးများ (ULCS) ဝင်​​ရောက်​လာမှုနှင့်​ Feeder သ​င်္ဘော အ​ရေအတွက်​ အချိုးမညီမှု​ကြောင့်​ Feeder သ​င်္ဘော ​တွေ ရှားပါးပြတ်​လတ်​မှု ကြုံရနိုင်​​ကြောင်း မီး​မောင်းထိုးပြ ပါတယ်​။
Thursday, 30 May 2019 07:53
Cargo loading and unloading (Shipping) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကုန်စည်ပစ္စည်းများကို ပင်လယ်ရေလမ်းခရီးဖြင့် ပို့ဆောင်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် သဘာဝပေါ်မူတည်၍ တင်ဆောင်ပေးပို့သည့် သင်္ဘောအမျိုးအစားမှာလည်း ကွာခြားမှုရှိနေပေါသည်။
Thursday, 23 May 2019 05:30
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအကြီးဆုံး ကုန်သေတ္တာတင်သင်္ဘော (၁၀) စီး
Wednesday, 22 May 2019 10:54
Mobile harbour crane / Ship-to-Shore Gantry crane တဈလကျဟာ တဈနာရီကို ပေ ၂၀ ကုနျသတ်ေတာ အမြားဆုံး ဘယျလောကျ အထိအတငျ/အခြ လုပျနိုငျသလဲ?
Friday, 10 May 2019 04:49
ကုန်​​သေတ္တာများ သ​င်္ဘော​ပေါ်တွင်​ ​နေရာချထားမှုအစီအစဉ်​ဇယား (Bay Plan) နှင့်​ ကုန်​​သေတ္တာ၏ တည်​​နေရာပြဂဏန်း (Cell Location) အ​ကြောင်းသိ​ကောင်းစရာ
ကုန်သေတ္တာအတွင်းရှိ အရည်ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
Thursday, 11 April 2019 03:47
General Average ဆိုသည်မှာ?
Thursday, 14 February 2019 04:55
ကုန်သေတ္တာများကို ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလာခြင်း Containerization
ကုန်သေတ္တာများ The Container
ကုန်သေတ္တာဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာကစံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းထည့်ရန်သေတ္တာဖြစ်ပြီး လုံခြုံစွာဖြင့် သင်္ဘောပေါ်တင်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ မြေပြင်တွင် ထားသိုနိုင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထားသိုသည့် နေရာ (space) ကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ပုံစံထုတ် ပြုလုပ်ထားပြီး ကား၊ ရထား သို့မဟုတ် သင်္ဘောတို့ဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည်။
ကုန်သေတ္တာများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းတွင် အကျိုးကျေးဇူးများ များစွာဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ကုန်သေတ္တာအသုံးပြုသည့်အတွက် အားနည်းချက်များလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
Thursday, 11 October 2018 10:09
Container Logistics Top 10 Carriers များ
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) နှင့် လိုင်းအပိုင် သင်္ဘောအရေအတွက်ကို အခြေခံတွက်ယူထားသော 2018 Top Ten စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1. A.P. Moller–Maersk Group================= Maersk / Maersk Line ပိုင်ရှင် A.P. Moller–Maersk Group ကတော့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသားပိုင် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ကုန်တင်သင်္ဘော လုပ်ငန်းပေါင်းစုပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့ Registered အလုပ်သမားပေါင်း 35,600 နဲ့နိင်ငံပေါင်း ( ၁၃၅ ) မှာ ရုံးခွဲပေါင်း ၅၇၄ ခု ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ဆိပ်ကမ်း ၃၄၀ ကျော်ကျော် ဆိုင်ကပ်တဲ့ သင်္ဘောစီးရေ 773 စီး ပြေးဆွဲနေပါတယ်။ 1904 မှာ စတင်ခဲ့ရာမှ TEU 4.1 million (18.7% market share) ဖြင့် ကမ္ဘာ့နံပတ် ၁ နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ 2. Mediterranean Shipping Company (MSC) ================================ MSC ဟာ Geneva အခြေစိုက် Italian သင်္ဘောလုပ်ငန်းပါ။ နာမည်ကြီး ဧရာမ သင်္ဘောများ နဲ့Cruise liner operator (MSC Cruises) များကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ နာမည်ကြီးခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း။ 1970 မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Patricia Vessel မှ စတင်ခဲ့ရာ သင်္ဘောစီးရေ 517 စီး 3.3 million TEU နဲ့ ဈေးကွက်ကို 14.8% အထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ။ 3. CMA CGM Group============== ပြင်သစ် သင်္ဘောလိုင်း CMA CGM ဟာ 1996 မှာ Compagnie Générale Maritime (CGM) နှင့် Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) ပူးပေါင်းခဲ့ရာမှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မပူးပေါင်းခင်ကာလ 1851 ကတည်းက သင်္ဘောလောက သမိုင်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့သူများပီပီ ယခု ကမ္ဘာ့တတိယမြောက် အကြီးဆုံးလိုင်း အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CMA CGM မှာ သင်္ဘောစီးရေ 493 စီးနှင့် TEU 2.5 million ဖြင့် 11.5% ဈေးကွက်ကို ဝေစုရထားပါတယ်။ 4. COSCO====== China Ocean Shipping (Group) Company, COSCO ကတော့ တရုတ်သင်္ဘောလိုင်း။ Beijing မှာ ရုံးချုပ်ထားရှိပါတယ်။ February 2016 မှာ China Shipping Group အဖြစ်စုစည်းခဲ့ပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံးလိုင်းဖြစ်ရာ Market share 8.9% ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။COSCO ဟာ သင်္ဘောစီးရေ354 စီး နဲ့ TEU2million အထိ ပြေးဆွဲ လည်ပတ်နေသူပါ။ 5. Hapag-Lloyd========= 1970 မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Hapag-Lloyd ကို အစပိုင်းက Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG) နဲ့ Norddeutscher Lloyd (NDL) တို့က ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ 2014 မှာ Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) ကပါ ပူးပေါင်းခဲ့ရာမှ ဂျာမန်ပိုင် ကမ္ဘာ့ ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းစု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ သင်္ဘောစီးရေ ၂၂၇ စီး TEU 1.6 million အင်အားနဲ့ ဈေးကွက်ဝေစု 7.3% ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 6. Ocean Network Express (ONE)================= Singapore Headquarters နဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ONE ကို ၇ ရက် ၇ လ ၂၀၁၇ မှာ Nippon Yusen Kaisha (38% stake), K Line (31% stake) and Mitsui O.S.K. Lines (31% stake) တို့နဲ့ ပေါင်းစည်းခဲ့တာပါ။ သင်္ဘောစီးရေ ၂၃၂ စီး TEU 1.5 million ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားရာ ဈေးကွက်ဝေစု 7.1% ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 7. Evergreen Marine Corp================= Evergreen ကတော့ နံပတ် ၇ မှာ ရပ်တည်နေတာပါ။ သင်္ဘောစီးရေ ၁၉၇ စီး TEU 1.1 million ကျော်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ဝေစု 5% ယူထားပါတယ်။ ရုံးချုပ်က Taoyuan City, Taiwan ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၈ မှာ စတင်လည်ပတ်ခဲ့သူပါ။ 8. Orient Overseas Container Line (OOCL)========================== 1947 မှာ Hong-Kong အခြေစိုက် OOCL ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Orient Overseas Line လို့ အစပိုင်းမှာ လူသိများခဲ့ပြီး 1969 မှာတော့ Orient Overseas Container Line လို့ အမည်ပြန်ပြောင်းခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ နံပတ် ၈ သဘောင်္လိုင်းပါ။နာမည်ကြီး ဧရာမ သင်္ဘော OOCL Hong Kong အပါအဝင် သင်္ဘောစီးရေ ၁၀၀ ကျော် 694,597 TEU နဲ့ 3.1% ဈေးကွက်ဝေစု ချုပ်ကိုင်ထားသူပါ။ 9. Yang Ming Marine Transport Corporation=========================== Keelung, Taiwan အခြေစိုက် Yang Ming ကတော့ 1972 မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ နံပတ် ၉ နေရာနဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ဘောလိုင်း။ သင်္ဘောစီးရေ ၁၀၆ စီးနဲ့ 646,393 TEU အင်အားရှိပါတယ်။ ဈေးကွက်ဝေစု 2.9% ကို ရရှိထားသည့် အဖွဲ့အစည်းပါ။ 10.Pacific International Line (PIL)====================== Singapore တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော PILဟာ သင်္ဘောစီးရေ ၁၃၅ စီးနဲ့ TEU 427,624 နဲ့ အဆင့် ၁၀ နေရာမှာ လည်ပတ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ဝေစုရဲ့ 1.9% ရှိပြီး 1967 မှာ တရုတ်လူမျိုး စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင် Chang Yun Chung တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Private Company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံး စုစုပေါင်း TEU capacity မှာ 22 million ဝန်းကျင်အဖြစ် ယူဆထားကြပါတယ်။
ကုန်တင်ယဉ် ၊ ကွန်တိန်နာကားများသွားလာမှု အချိန်ကာလတခု သတ်မှတ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မောင်းနှင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ၊ တွဲကားများ၊ကွန်တိန်နာကားတွေ ပြေးဆွဲနေတာတွေကို အများပြည်သူလူထု အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေနိုင်မယ့် အချိန်ကာလတစ်ခု အမြန်ဆုံးသတ်ပေးရန်အစီအစဉ် ရှိမရှိ အင်းစိန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေဖြိုးဟန်က မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြေးဆွဲနေတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေ၊ တွဲကားတွေ၊ ကွန်တင်နာကားတွေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ချိန်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ပြီး ပြေးဆွဲစေခဲ့ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမူလထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်မှာ အသက်ဝင်နေပါသေးသလား၊အသက်ဝင်နေပါက အရေးယူဆောင်ရွက်မရပါသလဲ၊ အသက်ဝင်ခြင်းမရှိတော့ပြီဆိုပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အသက်မဝင်တော့သည်ကို အများပြည်သူသိရန်ဖြေ ကြားပေးဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေး မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှု ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု့ လျှော့ချနိုင်ရေး နှင့် အများပြည်သူသွားလာအဆင်ပြေစေရေးအတွက် ကုန်သေတ္တာယာဉ်နဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ကစပြီး ယာဉ်+ ကုန်ကိုးတန်၊ ဝင်ရိုး နှစ်ချောင်း၊ခြောက်ဘီးအထက်ယာဉ်တွေကို ည ၂၁းဝဝ နာရီ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ဝ၆းဝဝ နာရီအထိ မောင်းင်ခွင့်ပြုရန် ကုန်သေတ္တာတင်ယာဉ် နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များ စနစ်တကျသွားလာနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုန်သေတ္တာယာဉ်နဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းများ ထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ရာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နည်းပါးတဲ့ လမ်းတွေဖြစ်တဲ့ မဟာဗန္ဓုလတံတား ၊ ရှုခင်းသာလမ်း ၊ရတနာလမ်း ၊ မောင်းမကန်လမ်း ၊ ပဲခူးမြစ်လမ်း အမှတ် (၂) သန်လျင်နေရာတွေကို သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာကလာတဲ့ ကုန်သေတ္တာယာဉ်နဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးတွေအတွက် သုဓမ္မာလမ်း၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ အမှတ်(၂) လမ်း၊ မောင်းမကန်လမ်းတို့ကို နေ့အချိန် ၁းဝဝ နာရီ၃းဝဝ နာရီအတွင်း ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူက “သတ်မှတ်ချိန်မဟုတ်ဘဲ မောင်းနှင်သွားလာပါက မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်သူရွက်နေပါတယ်။ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေးအတွက် ကုန်သေတ္တာယာဉ်အသင်းက တာဝန်သူတွေနဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ တို့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရာထိရောက်စေရေးအတွက်မြို့နယ်အလိုက် မော်တော်ယာဉ်ပေါင်းစုံစည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရေးကြီးကြပ်မှု ကော်မတီများဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သေတ္တာတင် မော်တော်ယာဉ်များအသင်းရဲ့ တင်ပြချက်အရ ကုန်သေတ္တာယာဉ်နဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေကို ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ကမ်းနားလမ်းတို့အဆင်ပြေချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်ဖို့ ဘုရင့်နောင်လမ်းနဲ့ ပုလဲလမ်းဆုံကနေ မြို့တွင်းကုန်သေတ္တာယာဉ်ဝင်းတွေကို ည ၁၁းဝဝနာရီ အချိန်ကနေ ယာဉ်တန်းဖြင့် စတင်ထွက်ခွာပြီး ၁၂း၃၀ နာရီနောက်ဆုံးထား ထွက်ခွာရန်နဲ့ ကမ်းနားကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဟုမ်းလမ်းထိပ်မှ မနက် ၁းဝဝ နာရီယာဉ်တန်းနဲ့ ထွက်ခွာပြီး မနက် ၂း၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထွတ်ခွာရန် သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ Source : KUMUDRA
Friday, 03 August 2018 11:09
ကုန်သေတ္တာသယ်ယူပို့ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှု
ကုန်ပစ္စည်းပါ ကုန်သေတ္တာအများစုသည် ရောင်းသူ နှင့် ဝယ်သူအကြား ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး သဘောတူညီချက်မှ စတင်နိုင်ပြီး
Thursday, 12 July 2018 04:22
ကုန်သေတ္တာ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုလုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လာခြင်း
Friday, 29 December 2017 10:39
မန္တလေးမြို့တွင် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး စီမံကိန်းကာလ နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်မည်ဟုသိရ မန္တလေးမြို့တွင် တည်ဆောက်မည့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ောဆက်ရန် စီစဉ်နေပြီး စီမံကိန်းကာလ နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ စီမံကိန်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ JICA က ဆောင်ရွက်ပေးသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၎င်းစီမံကိန်းအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သော်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ Toos Port စနစ်မှာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ သုံးစွဲမည့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများကို နိုင်ငံတော်အပိုင်းက ကျခံပြီး အလုပ်သမားများကို ပုဂ္ဂလိကမှ ဆောင်ရွက်သည့်စနစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က ကျခံရမည့် ကုန်ကျငွေများအား Japan Grant Aid ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားကြောင်း သိရပါတယ်။ မြစ်တွင်းသွား ကွန်တိန်နာပို့ဆောင်ရေး တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့် မန္တလေးကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းသည် ယခင်က အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများအား ရေယာဉ်တွဲများဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်နေခြင်းအစား ကွန်တိန်နာ များဖြင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှ အထက်မြန်မာပြည်အထိ တိုက်ရိုက်မြစ်ကြောင်းမှ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ချိန်ကတော့ နှစ်နှစ်နီးပါးပါ။ အကြမ်းဖျဉ်းလျာထားတာက ၂၀၁၈ မှာ စမယ်ဆို ၂၀၂၀ မှာ အဆုံးသတ်ပါမယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စတင်ချိန်နောက်ကျမယ့်အနေအထားမှာ ရှိနေတော့ ပြီးမယ့် အချိန်လည်း နောက်ကျမှာပါ။ စီမံကိန်းတွေကတော့ စက်ပြင်ရုံ၊ Workshop တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်။ သင်္ဘောပေါ်က အတင်အချပြုလုပ်နိုင်မည့် ရွေ့လျားကရိန်း၊ Mobile Car Crane နဲ့ လုံခြုံရေး အဆောက်အအုံတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းအလျားကတော့ မီတာ ၁၈၀ (ပေ - ၅၉၀) ရှိပြီး သင်္ဘော နှစ်စင်းကပ်ပြီး ကရိန်းတွေနဲ့ အတင်အချလုပ်နိုင်မယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်တိန်သွားကားလမ်းက သုံးလမ်းနဲ့ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ လူသွားလမ်းတွေပါမယ်ဟု ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တွင် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ပြီးစီးမည်ဆိုပါက ရေကြောင်းသွားလာရေးတွင် ကုန်စည်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Source: Daily eleven